संघीय सरकारकाे प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवालाको हातमा गयो : मन्त्री झाँक्री | Nepal Ghatana
संघीय सरकारकाे प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवालाको हातमा गयो : मन्त्री झाँक्री
प्रकाशित : १ पुष २०७८, बिहीबार २२:४८
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छानिरहेको बताउनु भएको छ ।
बिहीवार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छानिरहेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताउनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजनाको छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो, ‘मंसिरबाट वडाबाट योजना छानिन्थे, फागुनमा गएर जिल्ला परिषद् भएर योजना छनोट हुन्थे । तर आज त संघीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट कितावमा शब्द हालेर छान्दैछन् । एलआईएम्बीएसमा छैन भनेपनि कतैबाट के गरेर शीर्षक पठाइरहेको छ । यस्तो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले फलो गरेका छैनन् ।’
उहाँले भन्नुभयाे, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अर्थसमितिमा हामी हुँदा बनाएको हो । त्यसले योजना छनोटको अधिकार राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दिन्छ । त्यहाँ ब्यूरोकेसीको भर नै नपर्नुस् । मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिज्ञमा नै हुनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने अभिलाषाले योजना छान्ने होइन । मैले न्याय गरेँ कि गरिन भन्ने कुरा हेरेर योजना छनोट गरौँ न ।’
मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्दा कस्ता कार्यक्रम छान्ने ? अर्थतन्त्रमा के दिन सकिन्छ भन्ने कुराको विचार नगरी छान्ने गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सयौँ परिवारहरु प्लाष्टिकको छानामुनि भइरहेको बेला एउटा डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यू टावरहरु बनाउन आवश्यक नरहेको भन्दै आधारभूत उपभोगको सेवासुविधा जनतालाई पुर्याउनु आजको आवश्यक्ता रहेको बताउनुभयो । मन्त्री झाँक्रीले योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो, ‘यहाँ अब विकास समिति लगायत विभिन्न समिति, अर्थसमितिहरुले पनि पूँजीगत खर्च कति गर्यौ ? भने बोलाउने बेलामा हाम्रो आयोजना छनोटको बेलादेखि नै यसका विषयहरु शुरु हुन्छन् । कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी गयो ? कस्ता कार्यक्रमलाई हामीले मल्टियसमा लैजाने ? त्यसले इकोनोमि इम्प्याक्ट के दिने ? भन्ने कुराको डिटेल अध्ययन र त्यसको गर्नुपर्ने पूर्ववत् शर्तहरु पूरा नगरी हामीले आयोजना छान्छौँ ।
सयौँ परिवारहरु प्लाष्टिकको छानामुनि हुन्छ, हामीले एउटा डाँडामा ५०, ५५ करोडका पार्क बनाउने कुरा गर्छौं । सयौँ परिवार अहिले पनि जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर र गर्मीमा लूले मर्ने अवस्था छ । तर हामी अर्बौं अर्बौंका भ्यूटावर बनाउँछौँ । आधारभूत उपभोगको अधिकारबाट जनता वञ्चित छन्, अस्पताल बनाउँदैनौँ, सुविधासम्पन्न अरु चिज नै प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसकारण योजना छान्ने कुराको असन्तुलनको लागि संसदले लगाम लगाउनु पर्छ । जतिपनि अथोरिटी छ त्यसलाई लगाम लगाउनु पर्छ ।’
समस्या धेरै भए, सोचेजति काम गर्नै सकिनँ: मन्त्री रामकुमारी झाँक्री